Apple namoaka Public Beta 2 an'ny iOS 10.2.1 sy macOS Sierra 10.12.3 | Vaovao IPhone
Apple dia namoaka beta 2 ho an'ny daholobe an'ny iOS 10.2.1 sy macOS Sierra 10.12.3
Betas tolakandro ho an'ny mpamorona sy mpampiasa nisoratra anarana tao amin'ny programa beta ho an'ny daholobe an'i Apple na dia Alarobia aza, ary tsy manana ny vatan'ny famotsorana efa fanaontsika taloha niaraka tamin'ny kinova beta intsony izahay. Amin'ity tranga ity dia namoaka ny kinova voalohany an'ny watchOS 3.1.3 anio tolakandro miaraka amin'ny Kinova beta-bahoaka an'ny iOS 10.2.1 sy macOS Sierra 10.12.3.
Amin'ity tranga ity, ny kinova beta ho an'ireo mpampiasa izay misoratra anarana amin'ity programa ity avy amin'ny tranokalan'i Programan'ny Apple Beta Software Azo alaina amin'ny alàlan'ny fampidinana mivantana ao amin'ny takelaka fanavaozana izy ireo izao. Mikasika ireo vaovao izay ampian'izy ireo amin'ity beta 2 an'ny rafitra miasa ity dia azontsika atao ny milaza fa tany am-boalohany izy ireo mitovy amin'ny ampiharina amin'ny kinova ho an'ireo mpamorona navoaka omaly izy ireo, fanatsarana ny fahamarinan-toerana sy fanamboarana bibikely.
1 Beta 2 ho an'ny daholobe iOS 10.2.1
2 Beta 2 ho an'ny daholobe MacOS Sierra 10.12.3
Beta 2 ho an'ny daholobe iOS 10.2.1
Aza manantena ny hahita vaovao mifandraika amin'ny kinova beta ankehitriny ary ny kinova iOS 10 ankehitriny ary taty aoriana dia efa nanampy vaovao sy fanovana lehibe momba ny fiasan'ny rafitra, tonga ny fotoana fandefasana ny rafitra miasa a kely kokoa ary amin'ity dia toa toa lasibatr'izy ireo ity beta ity. Na dia marina aza fa ny kinova iOS 10.2 dia mety hanana fitarainana fanjifana bateria avy amina vondron'ireo mpampiasa, miasa tsara tokoa ny rafitra miasa.
Beta 2 ho an'ny daholobe MacOS Sierra 10.12.3
Amin'ity tranga ity dia hitantsika ny mitovy amin'izany. Fanatsarana mifandraika mivantana amin'ny fahamarinan-toerana rafitra sy ny fanamboarana bibikely noho ilay kinova taloha. Elaela i Apple raha tsy manome hevitra momba ireo vaovao izay nampiana ao amin'ireo kinova beta ary toa kely fotsiny ny vaovao amin'ity beta vaovao ity raha mitandrina ny tatitra ataon'ny mpamorona efa nametraka an'ity kinova vaovao ity tamin'ny Mac nandritra ny iray andro isika.
Raha misy vaovao manandanja amin'ireto kinova ireto dia zarainay amin'ny Internet izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » Apple dia namoaka beta 2 ho an'ny daholobe an'ny iOS 10.2.1 sy macOS Sierra 10.12.3
Apple dia namoaka ny beta voalohany an'ny watchOS 3.1.3 ho an'ny mpamorona